Yusuf Garaad: November 2014
Ceel-Huur oo aan ka fogey Xarar-Dheere
Waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ah ee isku dilaya aagga Xarar Dheere in ay Ilaaheey ka baqaan oo ay joojiyaan dilka.
Qof aad dishay kuma cafin karo. Weligaa waxaad noolaaneysaa adiga oo gacan ku dhiigle ah. Aakhrina meesha ku sugeysa waad garan.
Haddii adiga lagugu dilana, ogow in odayaal aan hadda wiilashoodu dagaalka kugula jirin ay hilib fiican ku qadeyn doonaan, dagaalkana halkaas lagu joojin doono. Golahaas lagu qadeynayana xataa magacaaga lagama sheegi doono. Adiga oo dhami waxaad isu baddeleysaa tiro. Dagaalka intaas ayaa ku dhimatay.
Hooyadaa iyo aabbahaa uun ayaad ka dhimaneysaa.
Ma hubo in ay bloggeyga akhrisanayaan, qofkii si uun u gaarsiiyana ajar Allah ha ka siiyo.
Waxaan madaxda Federaalka iyo kuwo maamullada degaanka, ee ku mansab sheeganaya in ay dadkaas ay ayagu matalaan ugu baaqayaa in ay is xasuusiyaan in ay ayagu dadkaas mas’uul ka yihiin. Magacoodana ay kuraas, Baarlamaan iyo Wasiirro leh ay ku qaateen.
Waxaan ugu baaqayaa in ay si muuqata, oo dhakhsa ah, oo Allah ka cabsi leh ay u gutaan waajibka ka saaran dadkooda oo xabbad ku dhimanaya ama ku barakacaya.
Waa in aad wiilasha dhimanaya ka soo qaaddaan wiilashiinna iyo walaalihiin oo kale. Ogaadana in aad mas’uuliyadda koowaad ay adinka idinku dhacayso. Maalin baa imaan la idinkula xisaabtami doono.
Haddii xilalka aad qaadateen aydnaan horumar kale ku gaarsiin karin degaankaas, waa in aad ugu yaraan xaqiijisaan in dadkaas dhiiggooda la kala badbaadiyo. Oo hadda la kala badbaadiyo.
Posted by Yusuf Garaad at 10:25:00
Afartii Madaxweyne ee Soomaaliya ugu dambeeyay waxay xilalka ka xayuubiyeen isu geyn tobaneeyo Ra’iisal Wasaare ka dib markii ay isku qabteen siyaasadda ama maamulka ama labadaba. Hal Madaxweyne ayaa isaguna is casilay ka dib markii ay Ra’iisal Wasaaraha is qabteen, caalamkuna kala saftay Ra’iisal Wasaaraha.
Inahaas oo dhami waxay ku tusayaan in khilaafka labada Xafiis aanuu ahayn wax u gooni ah Madaxdeenna maanta joogta.
Waxaan hubaa in si uun looga gudbi doono khilaafka hadda taagan.
Laakiin aniga su’aasha aan jeclaa in aan is weydiinno oo jawaab u wada raadinno waxay tahay waa maxay casharka aan ka baran karno dhibaatadan soo noqnoqotay, ilaa iyo haddana la la’ yahay Madaxweyne iyo Ra’iisal Wasaare ka badbaaday?
Marka xaaladdan laga gudbo, maxaa la sameyn karaa si mustaqbalka dhow iyo kan fogba looga baaqsado iska hor imaadka Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha?
Posted by Yusuf Garaad at 18:02:00
Saxaafadda Soomaalida qaarkeed, oo ka warramaysa wixii shalay ka dhacay Baarlamaanka, ayaa yiri - Xildhibaannada mucaaradka ayaa jeex jeexay mooshinka kalsoonida lagala noqonayo Xukuumadda.
Bal u fiirso? Mucaarad miyaa daafaca Xukuumad la ridayo?
Ma aqoon darraa u geysay mise daneysi? Ma ogi anigu. Laakiin Saxaafaddaasi waxay si khaldan u adeegsaneysaa ereyga mucaarad. Sababta oo ah mucaarad dowlad ma daafaco ee wuu ridaa. Mucaarad waxaa Xukuumad ku ah ciddii rideysa, muxaafadna waxaa ah kan daafacaya. Waa marka Xukuumad laga hadlayo.
Laakiin Baarlamaankeenna arrinta hortaalla ma ahan mid mucaarad iyo muxaafad loo kala saari karo. Xataa Golaha Wasiirrada ayaa qaar doonayaan in ay ridaan Xukuumadda, sidaa darteedna mucaarad iyo muxaafad midna laguma tilmaami karo Wasiirkaas.
Markaa waxaa ila habboon, in mucaarad haddii la isticmaalayo la raaciyo waxa mucaaradka uu qofkaasi ku yahay. Sida Xildhibaannada mucaaradsan Xukuumadda. Iyo Xildhibaannada mucaardsan mooshinka kalsoonida loogala noqonayo Xukuumadda.
Waxaase ka habboon in laga dhowrsado adeegsiga mucaarad iyo muxaafad marka laga hadlayo arrintan miliqsan ee xataa Golaha Xukuumaddu ay ku kala qeybsan yihiin.
Sheeg xildhibaanku waxa uu doonayo ama diiddan yahay, ka dibna akhristaha u daa go'aanka ah in qofkaasi mucaarad yahay iyo in uu muxaafad yahay.
Posted by Yusuf Garaad at 08:35:00
Siyaasiyiinteennu waa in ay wax ka bartaan oo ku daydaan hannaanka siyaasadda ee caalamka Dowlad wanaagga looga dhaqmo. Haddii ay yaqaannaan laakiin ay la tahay in aan Soomaaliya looga baahnayn ama aan Soomaalidu u qalmin, waxaan u haystaa in ay nagu dagmeen.
Baarlamaanku sharci ayuu dejiyaa, siyaasaddiisana sharci ayuu ku meel mariyaa. Sidoo kale, khilaafkiisa sharci ayuu ku kala saaraa. Ma ahan in la isku dayo in wax aan ku qorneyn xeerka Baarlamaanka la isku hor taago ama lagu meelmariyo mooshin.
Golaha Wasiirrada oo tiro ahaan ka kooban Baarlamaanka ayaan isaguna dhaliil la’aan ahayn.
Mucaarad ayaa Ra’iisal Wasaare ugu baaqa in uu is casilo. Sababta oo ah mucaaradku xukuumadda cod kuma laha, kamana tirsana.
Weyna dhacdaa in Wasiir uu sinnaba ugu qanci waayo habka Ra’iisal Wasaare ku socdo ama uu wax u maamulayo. Markaas Wasiirka ayaa laga rabaa in uu is casilo oo iska beri yeelo siyaasaddaas uu ku qanci waayay. Markaasna isaga oo aan Xukuumadda ka tirsaneyn uu mucaarado siyaasadda Ra'iisal Wasaaraha.
Yaan dhinacna wax igu seegin. Oo Xukuumadda aan isku dayo in aan rido, haddii aan ridi waayana aan isaga jiro oo yaan jagadeydu i seegin, ma ahan dhaqan siyaasadeed oo wanaagsan.
Hore ayay u dhacday, haddana way taagan tahay. Waxaan rajeynayaa in ay siyaasiyiinteennu ay ka koraan oo ay ka qaangaaraan daneysiga shakhsiga ah ee mutuxan ee aan mada’ iyo dan dal midna ku saleysneyn isla markaana aan lagala xishooneyn shacabka Soomaaliyeed.
Ku meel gaarkii waan ka qaangaarnay ee dhaqanxumadii siyaadeed ee ku meel gaarka waa in ay siyaasiyiinteennu ay ka qaangaaraan.
Posted by Yusuf Garaad at 14:19:00